चैत २४, पाल्पा । युएईमा नेपालीको हितमा काम गर्ने पाल्पाली समाज युएईका महासचिव धनबहादुर क्षेत्रीले विदेशबाट फर्केर कृषिफार्म सञ्चालनमा ल्याएका छन् । युएईमा १३ वर्षसम्म काम गरेका क्षेत्रीले कृषिफार्म तथा भान्साघर सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सन् २००३ देखि २०१८ सम्ममा युएईमा कुकम्यान (खाना पकाउने मान्छे)...
भक्तबहादुर शाही चैत २०,नेपालगञ्ज । दुई करोडको लगानीमा बाँके बैजनाथ १ का युवाले सामुहिक च्याउखेती गर्दै आएका छन् । एक करोडमा आधुनिक प्रविधिबाट च्याउ उत्पादन गर्दै आइरहेका युवाहरुले यसबाट आम्दानी गर्न थालेपछि थप एक करोड लगानी गरि च्याउखेती व्यवसायमा लगानी बढाएका हुन् । बजारमा विदेशी र गुणस्तरहीन च्याउ...
चैत १४, कैलाली । गाउँघरमा केही छैन, केही गर्न सकिन्न भन्दै निराश बनेका युवाका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका छन् , कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ४ का २५ वर्षीय रमेश चौधरी । प्राविधिक शिक्षातर्फ धेरैको आकर्षण छ, प्राविधिक शिक्षा लिएका धेरै युवाको पहिलो रोजाइँ एउटा आकर्षक तलब सुविधासहितको नोकरी हो, तर कृषि...
नेपालगञ्ज । बाँकेको सोल्टी होटलको साझेदारीमा सञ्चालित गेट भोकेशनल वेस्टइन्डले प्राविधिक तथा व्यवसायमूलक शिक्षामार्फत रोजगारी सृजनामा सघाउँदै आएको छ । होटल व्यवस्थापन संकाय पढाइ हुने उक्त कलेजले बेरोजगार युवालाई आतिथ्य सेवासम्बन्धी तालीम तथा प्रशिक्षण समेत दिने गरेको छ । कलेजले विद्यार्थीलाई थाइल्या...
काठमाडौं । सन् २०१९ मा दक्षिण कोरियाको रोजगारीमा जान भाषा परीक्षा आवेदन भर्नेको संख्या बुधवारसम्म ८१ हजार ७७ पुगेको छ । नेपालीको आकर्षक श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको कोरिया जान प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि उक्त संख्यामा आवेदन परेको हो । भाषा परीक्षा आगामी जेठ २५ र २६ गते सञ्चालन हुनेछ । ईप...
चैत १३, दमौली । तनहुँको भिमाद नगरपालिका–९ पाथर्दीका शिवकुमार आलेले ७० ओटा बाख्रा पालेका छन् । उनले बाख्रापालनबाट वार्षिक रू. १० लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्छन् । सोही ठाउँका श्रीमाया आलेले ४५ ओटा बाख्रा पालेकी छिन् । उनको आम्दानी वार्षिक रू. ५ लाखभन्दा बढी छ । अर्का किसान खिमबहादुर थापाले ४० ओटा बाख्रा...
चैत १२, वीरेन्द्रनगर । वीरेन्द्रनगर ५ श्रीनगरकी नन्दा गुरुङलाई सानोतिनो घरायसी काम चलाउन पनि श्रीमानकै भर पर्नुपथ्र्याे । घरायसी सामान किन्न होस् या बच्चाबच्चीको पढाइको खर्च जुटाउन, उनलाई श्रीमानको भर नपरी सुखै थिएन । ४ वर्षयता भने घरभित्रको काममा मात्र सीमित नन्दाको जीवन फेरिएको छ । उनी अचेल साँझ र...
चैत १२, भरतपुर । चितवन माडी नगरपालिका ८ शिवद्वारकी नरदेवी पुनलाई पछिल्लो समय घरबास (होमस्टे) मा आउने अतिथिको स्वागत, सत्कार र घरायसी काममा व्यस्तता बढेको छ । चितवन माडीस्थित अयोध्यापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक घरवासमा आउने पर्यटकको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएपछि उनको व्यस्तता पनि बढेको हो । सो घरवास २०७२ मा...
चैत ८ , लम्की । ‘राजनीति पेशा होइन, समाजसेवा हो’ भन्ने मान्यतालाई राजनीतिमा लागेका कैलालीका केही युवाले व्यवहार मै उतार्न थालेका छन् । उनीहरु जीविकोपार्जनका निम्ति कृषिलाई पेशा बनाउन थालेका छन् भने राजनीतिलाई विशुद्ध समाजसेवाको रुपमा अघि बढाउने प्रयासमा छन् । मातृका तिमिल्सेना तत्कालीन नेकपा एमालेका...
चैत ७ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो तहमा रहेका बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रम शाखाका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमार्फत सबै स्थानीय तहलाई बेरोजगारको...